トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "tangi", iro shamwari manzwiro?
Mu "tangi" neizvi nzvimbo zvichireva
nyanzvi kufembera kuti 3500 Yen Free yokunyatsoongorora kuwana nzira
Marseille shanduro matangi ari kadhi kwave wakavhomorwa mambo wechiduku mhiri tangi. Tenderai korona yendarama, asi mambo wechiduku akapfeka zvombo am iri sei vava kuda vachimhanya tangi, mavhiri Iwe wanga padivi, sezvo imbwa mbiri nebhiza hauna itsvo, substantially ari tangi haana kunge run.
Asi mambo wechiduku kubva zviri sei hauna kukumbira kuti kunetseka pamusoro chinhu chakadai, mambo wechiduku ari saibva chaizvo munhu, zvave zvichishandurwa kuti pane mukuru wokuti kuti vangoramba kurwisana zvimwe mhando. Pane musikana mambo murwi ari uremu shanduro vari akatasva matangi, ndiwo imbwa mbiri bhiza anova imbwa maviri sphinx, asi zviri kuratidza kunetsana vasati chiito saizvozvo. Kunyange kana iwe
Matangi ose anokumhan'arira manzwiro
matangi ari kadhi rine zvakanaka nzvimbo Vanzveri kureva akabuda zvakanaka nzvimbo iri mumamiriro ezvinhu akaoma, achiita kwakakasharara kubudikidza kutenda kana ukaenda, rinomiririra kuti zvinobvira kuwana chokwadi nemigumisiro yakanaka. Kana vaviri ndinofunga vanhu, mumwe bato akafunga hwaizova zvinofadza chaizvo ukama newe. Chii chave ikumikidzo ukama newe pane mumwe sokuti ukama hwako ari kufunga muchato.
zvaunoda uye nokusingaperi kuva pamwe, vachifunga kuti ndinoda kutaura, nokuti pfungwa yokuva kwazvo zvechisimba pakureva ukama newe, iwe uchava wakanaka uye akaita zvaienderana anokumhan'arira. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo shamwari iri hurumende kuti vari kutsvaka shamwari vanoda rudo.
kubva wava nehasha mamiriro noruremekedzo kuti rudo nezve "Ndinoda kusangana zvakanaka vanhu, kunyange kuenda! kuti pose kuitira kuti vasangane", zvichaita zvakakwana angaedza kuti mupikisi ake . Saka kuti vamwe vebato inoita vanhu imi zvinonakidza, iwe kutarira kufadza rodzai dzavo Please.
mupikisi manzwiro kuti neizvi nzvimbo Matangi zvinofanirwa kureva
matangi ari neizvi nzvimbo ndechokuti mugumisiro kumhanyira kuramba tsamwa, hauchafambi kunze mugumisiro wakaipa chete, kuti vave vasina tariro chillin, inomiririra kuti vave mupfungwa kune vamwe. Kana vaviri ndinofunga vanhu anokumhan'arira Ndinofunga rinokosha chinhu kwauri, asi akasimuka Sakibashi 'chete manzwiro, rinomiririra hurumende havagoni kutora matanho akadai vanofunga. Kana
uchida kuchengeta ukama nevamwe bato, henyu wachi zvinyoronyoro mupikisi. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo pane zviratidzo kuziva kuti zvimwe zvinhu zviri pfungwa pane rudo. Chokutanga, edza kutaura seshamwari, ngatimirirei kuti kana anokumhan'arira ichichinja Hito.